Bankiga Aduunka Oo Soo Ceshay Xiriirkii Burburay Ee Uu La Lahaa Soomaliya |
Bankiga Aduunka Oo Soo Ceshay Xiriirkii Burburay Ee Uu La Lahaa Soomaliya
Guddiga Agaasimayaasha Banka Adduunka ayaa shalay si rasmi ah dib ugu soo celiyey xiriirka Banka uu la lahaa Soomaaliya kadib 30 sano.
Tallaabadan ayaa Soomaaliya siineysa fursad ay maal-gelin uga hesho barnaamijka horumarinta caalamiga ah ee Banka Adduunka ee loo soo gaabiyo (IDA), iyo la shaqeynta garabyada kala duwan ee Banka Adduunka, si ay usoo jiidato maal-gashi caalami ah.
“Go’aanka maanta waxa uu dhabbaha u xaarayaa dib u billaabidda rasmiga ah ee howl-galladeena, si Banka Adduunka uu taageerada ug xooggan uguna macquulsan u siiyo dadaallada Soomaaliya ee ku wajahan dib usoo kabashada dhaqaale iyo midda bulsho,” waxaa sidaas yiri Agaasimaha maamulka howl-gallada Banka Adduunka Axel van Trotsenburg.
Axel ayaa sheegay in tani ay tahay natiijada wada-shaqeyn sanado badan soo socota oo ay la lahaayeen dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Dadaallada dib loogu soo celinayo xiriirka Soomaaliya iyo hay’adaha maaliyadda ee caalamiga ah, ayaa waxaa soo billaabay dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh, oo qabatay howsha ugu xooggan ee aas-aaska xiriirada.
Hindise maal-gelin oo cusub oo lagu taageerayo Soomaaliya ayaa waxaa hadda diyaarinaya Banka Adduunka, kaasi oo qeyb ka ah barnaamijka IDA, waxaana lagu caawinayaa dadka ay abaaraha iyo daadadka ku saameeyeen Soomaaliya.